China Refrigerated Transport Board Bonding rụpụta na Factory | Akwa Ugbo
Polyurethane nyagide maka refrjiraeto iga board bonding
Koodu: usoro SY8429
Ekwesịrị ijikọta akụkụ nke usoro ụgbọ njem nke thermostatic na mkpuchi polyurethane n'oge usoro mgbakọ ahụ niile iji hụ na ike dị ukwuu ma dịkwuo ogologo. Ihe mkpuchi Sanwichi maka mbadamba mkpuchi mkpuchi a na-ejikarị polyurethane, mbadamba polystyrene na bọọdụ akpọrọ na ahịa. Ihe ohuru ohuru nke ike polyurethane na-eguzogide ihu igwe nke Shark meputara na nzaghachi nye ihe ndi di n'elu nwere ike ijide n'aka na nkedo siri ike na nkwekorita nke ihe ndi njem n'igwe. Truckgbọ ala a na-emegharị ahụ nwere akụkụ nke ije ụgbọ ala ụgbọ ala pụrụ iche, ahụ ọkụ na-ekpo ọkụ (nke a na-ejikarị ihe polyurethane, nke nwere iko plastik, eriri igwe, igwe anaghị agba nchara, wdg). na ihe ndi ozo. Maka ugbo ala nwere ihe puru iche, di ka ndi eji egbu ahihia enwere ike inwe nko nke anu, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo di iche iche nke alumini, oghere ikuku na ihe ndi ozo.
refrjiraeto iga board bonding
iko efere iko, igwe anaghị agba nchara wdg.
isi ihe dị ka extruded osisi na polyurethane board
Nchekwa oyi bụ ụlọ na-eji friji wuruwuru iji mee ka oghere dị ogologo ruru ọnọdụ a kapịrị ọnụ, nke dịkwa mma maka ịchekwa ihe. Ihe mkpuchi mkpuchi mkpuchi oyi bụ ihe anyị na-akpọkarị polyurethane oyi nchekwa, ya mere, mkpuchi mkpuchi polyurethane dabere na ihe ndị ọrụ chọrọ ma ọ bụ ọrụ akọwapụtara. Anyị n'ozuzu na-emepụta ụfụfụ polyurethane dị ka bọọdụ sandwich maka ihe mkpuchi. Ihe mkpuchi ihe bụzi ihe mkpuchi mkpuchi kachasị dị na nnukwu nchekwa oyi na ọkara.
Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi mkpuchi mkpuchi polyurethane na-ejikọkarị 50MM, 75MM, 100MM, 120MM, 150MM, 200MM, 250MM, 300MM na nkọwa ndị ọzọ, mana ogologo na obosara nke mkpuchi mkpuchi mkpuchi oyi nwere ike ịhazi dị ka ezigbo mkpa nke ndị ọrụ. N'ozuzu, a na-agwakọta ihe polyurethane ojii na nke ọcha na ụfọdụ ruru na saịtị, wee fụpụta ụfụfụ ahụ ka ọ bụrụ ihe eji emepụta ya na akụrụngwa nrụgide dị elu na ụfụfụ.
Enwere ike iji aka ya rụọ ọrụ site na ịchacha, na igwe nwere ike ịpịgharị. Oge imeghe dị ogologo na nwube ihe owuwu dị elu.
O kwesịrị ekwesị ka ntuziaka squeegee mkpuchi, igwe ịsa ahụ mkpuchi, oyi na ịpị usoro, ọ dịghị igwe igbochi, mfe ọrụ site na ndị ọrụ, na-adaba adaba ewu.
Enwere ike iji ihe nkedo mee ihe ogologo oge, na nguzogide ihu igwe nke ngwaahịa a na-agbaso ụkpụrụ JG / T 396.
Nke gara aga: Mgbochi ákwà ihe owuwu
Osote: Mkpokọta mkpuchi mkpuchi Mgbakọ